कसरी भएका थियो २०५४ मा स्थानीय निकायको चुनाव (डा.वीरेन्द्र मिश्रको अन्तर्वार्ता) | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
वि.सं. २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई तपाईंले कसरी सम्झनु हुन्छ ? विगतबाट शिक्षा लिनुपर्ने केही अनुभवहरु ?यी कुराहरु मैले बारम्बार आफ्ना लेखहरु मार्फत व्यक्त गर्ने गरेको छु । मलाई लाग्छ हामीकहाँ निर्वाचनको वास्तविक अर्थ नै बुझेका भनिएका मान्छेहरुले, नेताहरुले बुझेकै छैनन् । अरु त अरु संविधान लेख्नेहरुले बुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । जनताले बुझने कुरै भएन । कहाँसम्म भयो भने संविधानलाई एउटा सत्ता पाउने साधनका रुपमा प्रयोग गरियो । जब कि निर्वाचन भनेको जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकारको कुरा हो । जोसँग कर्तव्य पनि जोडिएर आउँछ । म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले यसलाई कहिलै पनि कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट हेरिनँ ।
कार्यकारीसँग सल्लाहा नै नगरी निर्वाचन घोषणा गर्नु ठीक थियो कि थिएन ?पहिलो तपाईंले ठहर्याउने ठीक र बेठीकको आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । ऐनले जे भन्छ आयोगले त्यही गर्ने हो । निर्वाचन आयोग आफैमा निर्णायक गर्ने संस्था होइन । उसलाई जे अधिकार दिइएको छ त्यही गर्ने हो । त्यसबेला मात्र के भएको हो भने आयोगलाई दिइएको अधिकारलाई हामीले अलिक अगाडि सरेर व्याख्या गर्यौँ र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियौँ । त्यसबेला आयोगमा हाम्रो धारणा के थियो भने २०४८ को निर्वाचन वास्तवमा निर्वाचन नै थिएन । किनभने काङ्ग्रेस–एमाले मिलेर राप्रपालाई निर्वाचनमा निर्वाद रुपमा सहभागी हुनै दिएका थिएनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा केही अप्ठ्याराहरु देख्नुभएको छ कि ?सुरुदेखि नै हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा निर्वाचन भनेपछि विपक्षीलाई आउन नदिने खालको दृष्टिकोण अँगालेको पाइन्छ । भारतमा समते त्यस्तै भइरहेको छ । खैर म त्यसबारे यहाँ केही भन्दिन । त्यो भन्नुको मूल अर्थ के हो भने आफ्ना मान्छेलाई मात्र भोट खसाल्न लगाउने र आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउने । पहिले पहिले प्रहरी प्रशासनको खर्चसमेत निर्वाचन आयोग मार्फत सुरक्षा निकायहरुमा जाने गर्दथ्यो । तर पछि त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनेभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै त्यसको पटक पटक चलाऊँ भनेर त्यही निर्णय गर्न लगाइयो । आज हरेक जिल्लामा निर्वाचन आयोगको आफ्नै कार्यालय छ भनेपछि पहिलेभन्दा सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
आजको मूल समस्या ?अहिलेको मूल समस्या भनेकै हामीले पद्धतिलाई राम्रो गरी अँगाल्न सकेनौँ । निर्वाचनलाई हेर्ने र बुझने हाम्रो दृष्टिकोण नै परिपक्व छैन । निर्वाचन एउटा लामो प्रक्रिया हो । जसमा राजनीतिक, कानुनी र न्यायिक जस्ता विषयहरु गासिएका हुन्छन् । यो चार मूल तत्व मिलेर बनेको हुन्छ । पहिलो– मतदाता, दोस्रो– उम्मेदवार, तेस्रो– निर्वाचन आयोग र चौथो– राजनीतिक अवस्था । निर्वाचन भनेको यो सबै प्रक्रिया मिलेर बनेको एउटा सिस्टम हो । हामीकहाँ मतदानलाई निर्वाचन भन्ने गरिन्छ । जब कि त्यो निर्वाचन प्रणालीको एउटा अङ्ग मात्र हो ।
स्थानीय तह र प्रादेशिक निर्वाचनमा आयोगले र दलहरुले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा ?हामी प्रयोगमा गइरहेको अवस्थामा छौँ । किनभने न हामी पूर्ण क्रान्तिकारी हुन सकेका छौँ, न पुरानो बाटोमा हिँड्न सकेका छौँ । डेमोक्रेसीमा स्थानीय तहको अथवा निकायको आवश्कता किन पर्यो भन्दा नागरिकलाई, अझ स्पष्ट गरी भन्दा एउटा व्यक्तिको एकाइलाई बलियो पार्न यस्तो व्यवस्था अँगालिएको हो । न कि प्रशासन र समाजलाई । म के देख्छु भने हाम्रा एमाले–काङ्ग्रेसका नेताहरु व्यक्तिको एकाईलाई बलियो पार्ने होइन कि प्रशासनलाई बलियो पार्न लागेका छन् । यसैले नै हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेगर्छ ।
अहिले पहिले भएका गाविस सङ्ख्यालाई घटाएर आधाभन्दा पनि कम बनाइएको छ । के त्यसले जनताको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ ? त्यसले आवाजविहीनहरुको आवाजको प्रतिनिधित्व हुन्छ ? यो प्रश्न टट्कारो छ । त्यसैले नेताहरुमा डेमेक्रेटिक सोच आउन जरुरी छ । हामीले गर्ने विकास भनेको व्यक्तिको एउटा एकाईको हो न कि समग्र समाजको ।- रातोपाटी
2/13/2017 01:42:00 PM